कोरोना कहर : लकडाउन खुलेको नभई खुकुलो गरिएको हो, सबै सचेत बनौँ – Mission Khabar
कोरोना कहर : लकडाउन खुलेको नभई खुकुलो गरिएको हो, सबै सचेत बनौँ
मिसन खबर ८ श्रावण २०७७, बिहीबार ०८:०७
काठमाडौं । चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउन १ सय २० दिनपछि अर्थात मंगलबार मध्य रातीदेखी सरकारबाट अन्त्यको घोषणा भयो । सरकारले लकडाउन हटेको भनिरहँदा अझै कोरोना कहर भने अन्त्य भएको छैन । बुधबार सय जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १८ हजार ९४ पुगेको छ । १२ हजार ६ सय ८४ जनाले कोरोना जित्दा अझै ५ हजार ३ सय ७० उपचाररत छन् । बुधबार मात्रै पनि थप २ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएर ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२ पुगेको छ ।
स्वतन्त्र स्वास्थ्य विज्ञ तथा सरुवा रोगका जानकारहरुले पर्याप्त परिक्षण गरेर कोरोनाको अवस्था एकिन गर्न सरकारलाई पटक पटक सचेत गराए । तर असार १५ बाट परिक्षणको दायरा बढाएर प्रत्येक दिन १० देखी १५ हजार स्वाब परिक्षण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले बरु असार १५ पछि उल्टै परिक्षण घटायो । बुधबार ३ हजार ७ सय ७९ जनाको मात्रै पीसीआर परिक्षण भएको छ । संक्रमित क्षेत्रबाट काठमाडौं भित्रिएकामा कोरोना पहिचान भइरहँदा स्थानीय संक्रमण पनि छिटफुट रुपमा पहिचान भइरहेको छ । अझ काठमाडौंका केही ढलमै कोरोना पहिचान हुँदा समुदायस्तरमै विस्तार गरेको आँकलन पनि गरियो । तर परिक्षणको दायरा बढाएर संक्रमणको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनुपर्ने सरकार उल्टै जनतामा बढ्दै गरेको कोरोनाको त्रासदी हटाउन लकडाउन पूर्णरुपमा खोलेको घोषणा गरिरहेको छ ।
हुनत, लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको भनिदैगर्दा भेला, समारोह, तालिम, सेमिनार, शैक्षिक संस्था सञ्चालन, समूहमा गरिने खेलकुद सैलुन, ब्युटिपार्लर, जिम, फिल्म हल, रेस्टुरेन्ट लगायतका मनोरञ्जनात्मक व्यवसायमाथीको बन्देज कायमै राखेर जोखिम कायमै रहेको सन्देष दिन खोजिएको छ । सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको भोलिपल्ट अर्थात बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट बच्न आवश्यक नियमहरू पालना गर्न सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत सबैमाझ अपिल गरेकि छिन् । यो अपिलले पनि सरकारले आवश्यक तयारी र योजना बिनै लकडाउन हटाएको संकेत गरेको छ । जनजीवनलाई सहज पार्न सरकारले बन्दाबन्दी केही खुकुलो गरेको मात्रै भनिदैगर्दा, आम सर्वसाधारण स्वतन्त्र भएका छन् । सडकमा देखिएका सवारी साधन र मानिसको चहलपहलले कोभिड–१९ संक्रमणको त्रास बिर्साइदिएको मात्रै छैन । थप जोखिम बढ्ने संकेत देखिदै छ ।
के भन्छन त स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु ?
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन नेपालमा कोरोना नियन्त्रण भएर लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको नभई संक्रमण हुँदाहुँदै लकडाउन केही खुकुलो भएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । घर, बजार, काम गर्ने अफिसदेखी हामी चढ्ने सार्वजानिक यातायात जताततै संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै पहिलेभन्दा सचेत बन्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले समुदायमा संक्रमण छैन भनिरहँदा कुन तहमा छ भन्ने काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरुले नै देखाइरहेका छन् । अन्य रोग लिएर उपचार गराउन पुगेका धेरै बिरामीमा संक्रमण भेटिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालमा उपचाररत वा उपचार गर्न पुगेकाहरु संक्रमित पहिचान हुँदा अधिकांश अस्पतालमा संक्रमण देखिएको छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ पुन भन्छन्–यदि समुदायमा संक्रमण छैन भने प्रत्येक अस्पतालमा कहाँबाट भेटिए ? समुदायमा संक्रमण फैलिएको यति धेरै संकेतहरु भेटिदा किन बेवास्था ?
उपत्यका बाहिरबाट उत्तिकै मानिसहरु छिरेका छन् । यो बेला संक्रमणको सम्भावना झन् बढेको छ । सरकारले समुदायमा व्यापक परीक्षण गरेर मात्र सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्नेमा सरकारले जनताको ज्यान भन्दा अर्थतन्त्रमा बढी ध्यान दिएको छ । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी पनि लकडाउन गरिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएपनि जसरी लकडाउन खुकुलो बनाइयो यो जनस्वास्थ्यको हिसाबबाट वैज्ञानिक निर्णय नभएको बताउँछन् । लकडाउन खुकुलो गर्नुअघि समाजमा संक्रमण कुन स्तरमा छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने बताउँछन् । केही नगरी लकडाउन खोल्दिएँ भन्नुको अर्थ बुझेर सबै नागरिक आफै सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए ।
लकडाउन खुलेपछि संक्रमण फैलिएका देश धेरै छन् । नजिकको उदाहरण बनेको छ दक्षिणी छिमेकी देश भारत । जहाँ संक्रमण र मृत्युदर निकै उच्च बन्दा रोकथाम नै जटिल बनिरहेको छ । अमेरिका, ब्राजिल लगायतका देश लकडाउन फलो नगर्दा र जनजिवन तथा अर्थतन्त्र चलायमान गराउँछु भन्दा कोरोना हब जस्तै बनेका छन् । यही परिदृश्य नेपालमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बारम्बार सरकारलाई चेतावनी दिए । समुदायस्तरमा जाँच गरेर कोरोनाको अवस्था पहिचान गर्न गरिएको आग्रह सरकारले कत्तिपनि सुनेन । काठाडमौं लगायतका केही स्थानमा जाँच गरिएपनि प्रभावकारी नभएको भन्दै जनस्तर र स्वास्थ्य विज्ञहरुले बिरोध गरे । अहिले पनि २० हजार ८ सय ४२ जना क्वारेन्टिनमा छन् । अझै परिक्षण घटाएर संक्रमितको संख्या कम भएपनि हामी ढुक्क हुने अवस्थामा पुगेका छैनौं ।
हुनत, लकडाउन खुल्दा यातायात क्षेत्रका हजारौँ व्यवसायीले लगानी सुरक्षित गर्न पाउँछन । यसमा जोडिएको लाखौँ मजदुरको जीविका सहज हुन्छ । उद्योग, बजार र पसल खुल्दा अर्थतन्त्र चलाएमान हुन्छ । व्यवसायीदेखी उनीहरुसँग जोडिएका मजदुरको आम्दानी बढ्छ । चार महिना लामो बन्दाबन्दीबाट सिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलाएमान गर्दा राज्यको राजश्वमा पनि योगदान पुग्छ । यसैका लागि सरकारले बन्दाबन्दी खोलेको देखिन्छ । तर यसबाट हुने संक्रमणको जोखिमतर्फ सरकारले सोचेको देखिदैन ।
नेपालमा संक्रमणको सम्भावना टरेको हो वा अब कसरी सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्नेहरु बढ्दैगर्दा तपाई हामी सबैले लकडाउन खुलेको नभई खकुलो भएको बुझ्नुपर्छ । भिडभाड हुने ठाउँलाई बन्देज लगाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरु लकडाउन खुलेको भनेर भ्रममा परेभने महामारीको खतरा बढ्न सक्छ । संक्रमणको जोखिम हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । त्यसैले सचेत भएर दैनिक जीवनमा फर्कनुपर्छ । तपाई सकभर भीडभाडमा नजानु नै राम्रो जानै परे माक्स, ग्लोब लगाएर जादा जोखिम कम हुन्छ । बाहिर जादा वा फर्किदा कुनै बस्तु छोएपछि सेनिटाइजर वा साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुनु नै अहिलेका लागि संक्रमण रोकथामको उत्तम उपाय ।
ट्याग : #breaking, #hot, #काठमाडौं, #जनस्वास्थ्य, #डा. अनुप सुवेदी, #डा. शेरबहादुर पुन, #नेपालमा संक्रमण, #नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९), #राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, #लकडाउन अन्त्य, #सरुवा रोग